कुन शेयरकाे मूल्य बढी टिकाउ ? हेर्नुस् वाणिज्य बैंकहरुकाे अवस्था निगरानी -
काठमाडौं । लगानी गरेको कम्पनी राम्रो चाहिने भनेको यस्तै बेलामा हो । तपाइँ यस्तो शेयर स्क्रिपको छनौट गर्नुस् जसले बजारको वृद्धिलाई साथ देओस् तर कसरेक्सनमा पछि हटोस् । तर त्यसो हुन सम्बन्धित कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास चाहिन्छ ।
२/३ दिनको कारोबारले नै कुन कम्पनी विश्वासिलो र कुन अविश्वासिलो भन्न सकिँदैन तर ३ दिनसम्म दोहोरो अंकमा भएको वृद्धि र बुधबारको सामान्य करेक्सनमा कम्पनीहरुले आफ्नो स्क्रिपको पर्फमेन्स कस्तो देखाए, त्यो बजारको एउटा दृष्टान्त बन्न सक्छ । यहाँ बैंक समूहका स्क्रिपहरुलाई अवलोकन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बजार उछाललाई बैंक समुहका सबै कम्पनीहरुले सघाए । बजारमा २४ कम्पनीका कारोबार भए जसमा २४ ओटै कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्यो । उक्त अवधिमा सिभिल बैंकको शेयरमूल्य सबैभन्दा कम अर्थात् ३ रुपैंयाले बढ्यो भने सबैभन्दा बढी नेपाल एसबीआई बैंकको शेयर ५४ रुपैंयाले बढ्यो । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने पनि यो अवधिमा एसबीआईकै शेयर सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सिभिल बैंकको सबैभन्दा कम २.२ प्रतिशतले मात्रै मूल्य बढेको थियो । हेर्नुहोस् सूची
बुधबार बजारमा सामान्य करेक्सन भयो । ३ दिनसम्म ५१ अंकले बढ्दा ३ रुपैंया मात्रै बढेको सिभिल बैंकको शेयरमूल्य एकैदिन सोही अवस्थामा फर्कियो । बुधबार एक दिनमै सो कम्पनीको शेयर ३ रुपैंयाले घटेको हो । बुधबार घटेको बजारमा हिमालयन बैंक सबैभन्दा पृथक देखियो । यो बैंकको शेयरमूल्य १ रुपैंयाले बढ्यो । बैंक अफ काठमाण्डू, एभरेष्ट र प्राइमको मूल्य यथावत रहँदा अन्य २० कम्पनीको शेयरमूल्य घट्न पुग्यो ।
यो अवधिमा बैंक उपसूचकको नाफा समग्र बजारको भन्दा बढी देखियो । गत बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज परिसूचक ११६६.२२ विन्दु कायम भएर रोकिँएको थियो जुन मंगलबारको अन्तिम कारोबारसम्म नेप्से १२१६.९२ विन्दु पुग्यो जुन ४.३५ प्रतिशत हो । उक्त बैंकिङ उपसूचकले यो अवधिमा ५.९५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको थियो ।
धितोपत्र बोर्डमा भिष्मराज ढुंगानाको 'म्याच फिक्सिङ', यसकारण निश्चित थियो उनकाे नियुक्ति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंंगाना नियुक्त भएका छन् । सोमबार...
४ कम्पनीका सवा २ अर्ब रुपैंया बराबरका शेयर कारोबारयोग्य
काठमाडौं । ४ कम्पनीका सवा २ अर्ब रुपैंया बराबरका शेयर आजदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य भएका...
नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन कम्पनीमा, कति र कसरी लगानी गर्ने त ?
विश्वमै पुँजीबजारलाई सबैभन्दा लाभप्रद र सबैभन्दा ‘रिस्की’ लगानीको क्षेत्र पनि मानिन्छ ।...
'आइतबारको कारोबार बजारको टर्निङ प्वाइन्ट'
काठमाडौं । सधैं कारोबारीहरुको योजनाका आधारमा चल्ने बजारलाई आइतबार लगानीकर्ताको उत्साहित...
लगानीकर्तालाई रिचार्ड बान्डका ५ सरल सुझाव, यसरी लिन सकिन्छ शेयरमा राम्राे नाफा
बजारमा चलायमान रहँदा धेरै तहबाट फाइदा हासिल गर्न सकिन्छ । लगानीको निर्णयको बाबजुद, त्यहाँ कति...
शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्दै ग्लोबल आईएमई बैंक, कति पाउला ओपन रेञ्ज ?
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक शेयर बजारको पाँचौं ठूलो कम्पनी बन्ने भएको छ । यसअघि उत्कृष्ठ १०...
समता लघुवित्तको ३१% लाभांशको भ्रम, विचार नपुर्याए यसरी डुबिन्छ लीलामीमा
काठमाडौं । बजारमा ३१ प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य कति हुन्छ ? अनि बजारमा १० प्रतिशत...
रणनीतिक महत्वका दुई साधारणसभा शुक्रबार, नयाँ डिस्कोर्स सुरु
पाम आयल आयातमा भारतको प्रतिबन्ध, नेपालको निर्यात व्यापार धरासायी
© 2020 All rights Reserved to nigarani.com